ASICS waxaa lagu sameeyaa iibsashada barnaamijka Runkeeper | Androidsis
Waxaan si fiican u galnay sanadka, waxaan ka tagnay Kirismaska ​​oo aan hada bilownay waxaad dareemeysaa inuu xagaaga jiri doono waqti dheer nala. Hadda waxaad eegaysaa culeyskaaga, khadkaaga iyo qaabkaaga muuqaal ahaaneed waxaadna bilaabeysaa inaad ogaato inay tahay inaad wax qabato si qallooca farxadda leh uusan u muuqan mid muuqda marka ay tahay inaad iska saarto funaanaddaada ama funaanaddaada isla markaana ay tahay inaad xoog ku muujiso haddii aad Wuxuu lahaa Wuxuu ka taxaddaraa xaaladdiisa jidh ahaaneed muruqyadaasina waa kuwo jilicsan oo hoos ugu dhaca culeyskiisa markasta oo uu dhaqdhaqaaq sameeyo marka uu dhaansanayo ama mid ka mid ah wiilasha uu adeerka u yahay uu gacmaha ku haysto. Sababtaas awgeed, way wanaagsan tahay in qofku ku rakibo mid ka mid ah barnaamijyadan si loo ilaaliyo muuqaalka jirka taasna waxay kuu oggolaaneysaa inaad u fiirsato horumarkaaga iyo haddii ay runti mudan tahay inaad jimicsi tagto galab kasta ka dibna aad orod u gasho saac.
Shirkadaha u heellan iibinta qalabka isboortiga sifiican ayey u yaqaanaan waxa aan ka hadlayo waana sababtaas sababta ay ugu boodeen barkadda si ay u iibsadaan barnaamijyadan garaacaya badhanka saxda ah si malaayiin isticmaaleyaashu u isticmaalaan maalin kasta si ay ugu duubaan dhaqdhaqaaqa jirkooda. Mid ka mid ah kuwan waa ASICS, oo ah magac caan ah oo isboorti, oo helay Runkeeper, mid ka mid ah barnaamijyada kormeerka dhaqdhaqaaqa jimicsiga ee ugu caansan Google Play Store. Iibsigan, ASICS waxay kubiirtey shirkado kale oo badan kuwaas oo iibsanaya dhamaan noocyada barnaamijyada si loo kordhiyo adeegyada loona gaaro tiro badan oo isticmaaleyaal ah oo hada wixii ka dambeeya awoodi doona inay maskaxdan ku soo daraan maskaxdooda mar kasta oo ay bilaabaan barnaamijkooda ay jecel yihiin. Runkeeper telefoonkaaga Android.
1 Laxanka maalmaha dhaca
2 Maaha kii ugu horreeyay
Laxanka maalmaha dhaca
Haddii aad tahay shirkad iibisa qalabka isboortiga, markaa waa muhiim inaad leedahay shabakad bulsheed kuu gaar ah la xiriira isboortiga maalmahan markay wax walba ku dhacaan barnaamijyada ku saabsan qalabka moobiilka. Tani waa sababta ugu weyn ee lagu ogaan karo sababta ASICS ula wareegtay Runkeeper heshiis uu horay u shaaciyay Jason Jacobs, oo ah madaxa shirkadda.
Qoraal lagu sii daayay Dhexdhexaad, Jones wuxuu muujinayaa in labadoodaba ay galeen hannaanka helitaanka, in kastoo muu sheegin inta ay ku kacayso iibsiga Runkeeper shirkadda. Waxa xiisaha u leh ASICS waa in la helo barnaamijkan, maxaa yeelay xogta ay soo uruuriso Runkeeper waxaa inta badan qaata dadka isticmaala kabaha calaamadahan. Aynu nidhaahno waa saaxiibtinimo sababi doonta mar uun in loo beddelo xiriir in gacmaha la is qabsado oo kaniisad la aado, xaaladdan oo ah heshiis wax iibsi.
Maaha kii ugu horreeyay
Waxaan tirin karnaa kiisaska aan la tirin karin ee barnaamijyadooda kuwaas oo ah iibsaday noocyo waaweyn sida Facebook oo leh WhatsApp ama Instagram, ama SwiftKey dhawaan ay qaadatay Microsoft. Laakiin haddii aan si toos ah ugu aadno qaybta barnaamijyada la socoshada dhaqdhaqaaqa jirka waxaan ka helaynaa Runtastic ay iibsatay Adidas ama sida Under Armor loogu sameeyay iibsashada Endomondo weyn iyo MyFitness Pal oo ah 500 milyan oo doolar.
Marka taas orodka dahabka maxaa loola jeedaa in la raadsado barnaamijkaas kaas oo adeegyo u fidiya malaayiin isticmaale ayaa wali la taagan khibradaha isticmaale ee cusub sida barnaamijyadan garanaya sida loola qabsado Android Wear ama kuwa u arka Xaqiiqda Virtual inay sabab u tahay in la siiyo wax soo saar ku dambeeya in la iibsado shirkadaha waaweyn.
Ilaa inta uu Run Run ka walwalsan yahay waan sii wadaynaa haysashada barnaamijkan weyn ee Google Play Store (waxaa hadda la cusbooneysiiyay bishii Diseembar), sidaas darteed haddii ay tahay tan loogu jecel yahay socdaalkaaga maalinlaha ah, ha ka welwelin, maxaa yeelay mararka qaarkood waxaad xitaa iibsan kartaa kabaha ASICS oo isku daraya muuqaal ka mid ah si aad wax badan uga hesho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sumadda isboortiga ASICS waxay iibsataa barnaamijka Runkeeper